I-Private Mackinaw City Beach Cottage ~ Ukubuka kwebhuloho - I-Airbnb
I-Private Mackinaw City Beach Cottage ~ Ukubuka kwebhuloho
Mackinaw City, Michigan, i-United States
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Ordel
U-Ordel Ungumbungazi ovelele
I-Cozy Beach COTTAGE enokubukwa kwe-Mackinaw Bridge kanye ne-Mackinac Island! Itholakala nje imizuzu eyi-10 ukusuka edolobheni laseMackinaw City kanye ne-Ferry Docks yayo.U-Bonfires, u-S'mores nomndeni, uhambo losuku lokuya e-Mackinaw Island, ukuvakashela e-Headlands International Dark Sky Park, i-zip-lining e-Mackinaw Mill Creek imizuzu engu-5 nje ukusuka, ishubhu yehla ngoMfula i-Indian cishe imizuzu engama-30 ukusuka lapho, noma umane usuka lapho. ukujabulela ukushona kwelanga okuyimfihlo noma ngaphansi kohambo lwebhuloho nokapteni u-Robydek, izinto ezimbalwa nje ongazenza 'Eziphezulu ENyakatho'!
Igumbi lokulala elikhulu line-en-suite yokugezela. Amanye amakamelo amabili okulala anendlu yokugezela ehlanganyelwe ngaphesheya kwehholo.Wonke amakamelo ane-fan, okuhlanganisa igumbi lokuphumula kanye negumbi lokudlela. Amafasitela neminyango kuyahlolwa, ngakho-ke kuhlinzeka ngokugeleza komoya opholile 'waMachibi Amakhulu'.Ayikho i-Air Conditioning. Sicela ufunde izibuyekezo ukuze ubone ukuthi abanye bathini ngokungabi nayo indawo yokupholisa umoya futhi ubone ukuthi baphuthelwe yini ukungabi nayo.Ngizothi, ngeke uphuthelwe. Kodwa uma ukudinga ngokuphelele, lokhu akukhona ukubhukha okulungile kuwe.
Ezinye izinto okufanele uzazi mayelana nezakhiwo zethu: Uma uhlela ukusebenza ngesikhathi sakho esidingeka kakhulu SEVAKASHI, i-WIFI yethu ingase ingabi namandla ngokwanele. Sicela ucabange ukuletha i-WIFI Hotspot eyengeziwe.
UOrdel Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Mackinaw City namaphethelo